Izindaba - Ugandaganda we-SD7N o-ode yiKhasimende laseGhana uhanjiswa ngokushelela
Ugandaganda we-SD7N o-ode yiKhasimende laseGhana uhanjiswa ngokushelela
Engxenyeni yokuqala ka-2021, ezinye izimakethe zaphesheya kwezilwandle zibe nomkhuba okwehlayo othintwe yilo bhubhane. Lapho kubhekene nobunzima, uMnyango Wezamazwe Wakwa-SHEHWA usamile kwelokuthi ubambisane namakhasimende aphesheya kwezilwandle ukwenza izikhangiso eziphelele ezimakethe zendawo, ukubamba iqhaza ngenkuthalo kumabhidi, nokulandela inqubekela phambili yamaphrojekthi abambezeleka ekuqaleni kwesikhathi. Ngemuva kwemizamo engapheli, ekugcineni sagqama emincintiswaneni kaningi sathola ama-oda amaningi ngokulandelana. Ukulandelwa kwephrojekthi yokuqala nako kwaba nenqubekela phambili enkulu, kufaka phakathi iphrojekthi ye-SD7N ngogandaganda eGhana.
Njengomenzeli wemishini yokwakha onethonya elikhulu eGhana, uMnyango Wezamazwe Wakwa SHEHWA uhlale ubhekana nemincintiswano evela eShantui, Zoomlion neminye imikhiqizo njalo lapho kuxoxwa nge-oda elisha nekhasimende laseGhana. Ngenxa yezinzuzo ezinhle kakhulu zobuchwepheshe, inkampani yethu ishaye kaningi eminye imikhiqizo futhi yathola ama-oda. Phakathi neminyaka edlule, ukuze kuqiniswe ubudlelwano nekhasimende laseGhanian, inkampani yethu ihlele ukuqeqeshwa okuhlelekile emakethe yaseGhana, ethole izindumiso ezinhle ezivela kumakhasimende futhi yabeka isisekelo esiqinile sokuthuthuka kwesikhathi eside phakathi kwamakhasimende aseGhana kanye Umnyango wamazwe omhlaba wakwa-SHEHWA.
Ngesikhathi senqubo ethize yokuqaliswa kwale oda ye-SD7N, ngoba isikhathi sokulethwa siqine kakhulu, yonke iminyango yenkampani ithatha izinyathelo ngejubane elisheshayo. Ngenxa yokubambisana okugcwele kwesikhathi esengeziwe sama-workshops, ugandaganda uhanjiswa ngesikhathi ekugcineni.
Isikhathi Iposi: Jul-08-2021